नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले राजीनामा दिएका छन् । खड्काले मंगलबार राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । खड्का १० वर्षदेखि राष्ट्रिय टोलीका कप्तान थिए । राजीनामा घोषणासँगै पारसले फेसबुकमा लेखेका छन्, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) निलम्बनबाट फुकुवा भएको खबर सुनेर निकै खुसी लागेको छ । नयाँ आएको कार्यसमितिले नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो कार्य गरोस् भन्ने चाहन्छु । मैले आजैका दिनदेखि नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानीबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
पोखरा रंगशालाको फुटबल मैदानमा भारतको कोलकत्ताबाट ल्याएको दुबो रोप्न सुरु गरिएको छ । निर्माण हुँदै गरेको पोखरा रंगशालाको फुटबल मैदानमा भारतीय कोलकत्ताको बर्माडा ग्रास (दुबो) रोप्न सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर दीपक बरालले बताए । पहिलो चरणमा एक गाडी अर्थात् १५ हजार वर्गफिट दुबो पोखरा आएको उनले बताए ।
नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को लोगो र मस्कट अंकित ब्यानर मनास्लु हिमालको चुचुरोमा पु¥याइएको छ । युवा स्काउटर एवं आरोही प्रकाशराज पाण्डेले सो ब्यानर मनास्लु चुचुरोमा पु-याएका हुन् ।
पोखरामा पहिलो पटक असोज २९ गते हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रस कन्ट्री (४२.२ किलोमिटर) दौड प्रतियोगिता छिमेकी मुलुक चीनबाट करिब ४० जना चर्चित धावकहरु सहभागि हुने भएका छन् । पोखरा क्षेत्रको साहसिक खेल पर्यटनको प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोेजना हुने उक्त प्रतियोगितामा चीनका ४० जना धावक, पत्रकार, सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहितको जम्बो टोली पोखरामा आउने भएको मंगलबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रम संयोजक विश्वशंकर पालिखेले बताए ।
तेस्रो संस्करणको साफ यू–१८ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधि भारतले जितेको छ । आइतबार हल्चोकस्थित एपीएफको मैदानमा भएको खेलमा बंगलादेशलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारत नयाँ च्याम्पियन बनेको हो ।
पोखरा रंगशालाको फुटवल मैदानमा भारतको कोलकत्ताबाट ल्याएको दुबो रोप्न सुरु गरिएको छ । निर्माण हुदै गरेको पोखरा रंगशालाको फुटवल मैदानमा भारतीय कोलकत्ताको बर्माडा ग्रास (दुबो) रोप्न सुरु गरिएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर ई. दीपक बरालले बताए । पहिलो चरणमा एक गाडी अर्थात १५ हजार बर्गफिट दुबो पोखरा आएको उनले बताए । भारतको नाकाबाट उक्त गाडी नेपाल भित्रिनको लागि प्राविधिक कारणवश तीन दिनसम्म रोकिन पुगेको ई. बरालले जनाए । उक्त दुबोमा माटो समेत टासिएकोले गर्दा भारतबाट नेपाल ल्याउन केही कठिनाई भएको उनले गुनासो गरे ।
नेपालका भेट्रान राष्ट्रिय टेनिस खेलाडी कमल थापाले ‘एनआइसी एशिया बैंक नेपाल आइटिएफ विश्व बरियता सिनियर्स ग्रेड ४’ टेनिस च्याम्पियनसीपमा दोहोरो उपाधि जितेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका थापाले पोखरा रङ्गशालाको टेनिस कोर्टमा बुधबार भएको ५५ वर्ष माथिको उमेर समूहको प्रतिस्पर्धामा भारतका सञ्जय कुमारलाई ६–४ र ६–२ को सोझो सेटमा पराजित गरी उपाधि प्राप्त गरेका हुन् ।